Min IETT ilaa Subaxda sanadka cusub | RayHaber | raillynews
HomeGUUDLaga soo bilaabo IETT ilaa Sannadka Cusub
31 / 12 / 2018 GUUD
marwalba sanadka oo dhan mar kale ilaa subaxdii 1
IETT ayaa duulimaadyo dheeri ah u dhistay bartamaha magaalada si ay dadka deggan Istanbul si ammaan ah ugu gaari karaan guryahooda 31 December Dambe New Year.
IETT waxay abaabuli doontaa duulimaadyo dheeri ah ilaa subaxa sanadka cusub si looga hortago dhibaatooyinka gaadiid ee dadka degan Istanbul. Wadarta 20 oo ay kujirto Metrobus xitaa waxaa lagu dhejiyay gawaarida 127 iyo gawaarida dheeraadka ah ee 665. Muwaadiniinta, Khadadka baska si ay u sameeyaan adeegyo dheeri ah www.iett.istanbul cinwaanka ama arjiga "MOBİETT".
METRO, MARMARAY iyo LAMBARKA MAGAALADA LAGU SAMEEYO
Dhamaan khadadka 'Metro Istanbul' dhamaan wadooyinka gobolka iyo Marmaray waxay shaqeyn doonaan ilaa 02.00 habeenkii. Khadadka Ferry ee ku xiran Khadadka Magaalada ayaa sidoo kale abaabuli doona safarro dheeraad ah. Duullimaadyada is-wadaagga ee khadka Kadıköy-Karaköy wuu socon doonaa illaa 01.00. Safka Beşiktaş-Kadıköy, saacadda ugu dambeysa ee ka socota Beşiktaş İskele waxay tagi doontaa 23.45 halka saacadda ugu dambeysa ee ka socota Kadıköy İskele ay tegi doontaa 23.15. Khadka Eminonu-Kadikoy, doonta ugu dambeysa ee ka socota Eminonu Iskele waxay tagi doontaa 22.30 iyo waxay ka imaan doontaa Kadikoy Iskele 22.00.
Metro waxay shaqaysay illaa subaxdii dadweynaha AKP
Istanbul Metro waa inay socotaa ilaa subaxda
EGO subaxdii ayaa la geeyay
Istanbul Metro waxay ka dhigi doontaa 02.00 on Christmas
IETT duulimaadyo dheeraad ah ayaa lagu dhawaaqay
Ankara Subway 10 Dib-u-dhicii Subaxnimada November
Bursaray wuxuu shaqeyn doonaa illaa 01.00e xilliga kirismaska
Shirkadda Uludağ ee magaalada Bursa waxay socon doontaa illaa 02.00 ee sanadka cusub (Video - Photo Gallery)